Fomati yekuparadza kana uchinotora mafoto kune macOS Mifananidzo | Ndinobva mac
Fomati yekuparadza kana uchinotora mafoto kune macOS Mifananidzo
Zvinogoneka kuti izvi hazviitike kwauri izvozvi kana kutomboitika kwauri paMac yako, uye ndezvekuti iko kukundikana kusingawanzoitika zvachose asi Inoita sevashandisi vazhinji kana ivo vachiedza kuendesa mafoto kune Mac vachishandisa iyo Photos application.
Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvikonzero zvakati wandei, asi chikuru chingave chakanangana nekuisirwa nyowani kweHEIF neHEVC mafomati, chimwe chinhu chiri pachena chinogona kugadziriswa nenzira yakapfava painotiratidza meseji iyo mufananidzo wepakutanga hauna kutsigirwa uye isu tinogadziridza kune yazvino vhezheni ye macOS.
Chinhu chikuru mune ino kesi ndechekuti isu tine zvese zvakagadziridzwa software, zvese paMac uye pane iyo iPhone, iPad kana iPod Kubata. Mune ino kesi, chatingaite kutarisa kana paine dzakamirira kuvandudzwa, kuvhura iyo App Store> Kugadziridza. kana ndangoita izvi, chatingaite kunosvika zvakananga ku Zvirongwa zve iPhone uye shandura mu Zvirongwa> Kamera> Mafomati rutsigiro rweaya mafomu matsva eHEIF uye HEVC. Kana iwe ukashandisa RAW mifananidzo muMifananidzo, ita shuwa yekumhanyisa yazvino RAW yekuenderana yekugadzirisa yemadhijitari kamera.
Chero zvazvingaitika, dzokorora kuti hakusi kukundikana kwakapararira uye nekudaro zvakakosha kujekesa kuti kuwiriranisa uye kuendesa mafoto edu muKushandiswa kweMifananidzo yeMacOS High Sierra, inoshanda zvizere. Iwo mafomati matsva emafoto ekutora nzvimbo shoma uye suite yekuvandudzwa kweApple's Mifananidzo yekushandisa inopfuura inoshanda mune dzakawanda kesi uye mashoma anowana matambudziko. Kune rimwe divi, zvinokwanisika kuti kana tichiita iyo fomati kutendeuka otomatiki pane imwe nguva inogona kutipa iko kukanganisa, mune izvo zviitiko isu tinofanirwa tarisa kuti zvese zvave zvechizvino uye tangazve Mapikicha app kana mafoto asina kuunzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Fomati yekuparadza kana uchinotora mafoto kune macOS Mifananidzo
Ini handina kukwanisa kumutsiridza Mac yangu ichibva yaturikwa. Iye zvino ndinofanira kutamira kune Apple Tuenda uye ndanga ndisina komputa kubva ipapo
Ndine dambudziko rakafanana uye ndine zvese zvakagadziridzwa
Ndine nyaya inotevera: mapikicha kubva kuGoogle mapikicha akatorwa kune hard drive. Ndinoda kuaisa muraibhurari itsva, uye ndinongoitira hanya mamwe acho. Kune akawanda eJPG, PNG kana GIF kana mamwe mavhidhiyo mafomati akasiiwa, uye anoti haana basa ... Inotyisa. Hapana zano rekuti chingave chii, sezvo mvumo ichiita seyakanaka, uye chirongwa chekutarisa chinovavhura.
Apple Inoburitsa Nyowani Apple Music Vhidhiyo, Inosimudzira Vazhinji Vanyori